Bilaogin’ny Skoto Shiliana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Oktobra 2017 4:31 GMT
(Fanamarihana: efa tamin'ny Janoary 2006 ny lahatsoratra teny Aglisy)
Nanangana bilaogy ho varavarankely mampiseho ny asan'izy ireo ny sasany amin'ireo vondrona. Sekoly mpitari-dalana mandefa lahatsoratra momba ny lasim-pahavaratra farany ny Primo Works. Namoaka hira faneva sy tantara samihafa tamin'ny lasy kosa ny Fivondronana Skoto, Antu Ayekan.
Ny Fivondronana San Agustín indray mampiseho sary sy torohay ho an'ny ray aman-dreny mikasika ny asan'izy ireo.
Bilaogin-tSkoto tsy ofisialy iray, indray mikendry ho toeram-pihaonana ho an'reo skoto. Afaka mijery fanamarihana mikasika ny ahiahin'ny ray aman-dreny, fampahafantarana ireo fivondronana skoto isan-karazany, ary toerana mety hanaovana lasy lehibe ny tsirairay ao anatin'izany bilaogy izany..